केइजो वर्थ हेर्दै छ? - पालना दृश्य
by Dima 17 अगस्ट 2020 12th जनवरी 2022
1 टिप्पणी केइजो वर्थ हेर्दै छ?
"Keijo !!!!!!!!!" बाट लिइएको
सबै भन्दा पहिले केइजो के हो बुझ्दछौं र त्यसपछि हामी कथाको बारेमा कुरा गर्न सक्छौं। केइजो एउटा यस्तो खेल हो जहाँ प्रतियोगीहरू, सबै महिला हुन्, आफ्ना विरोधीहरूलाई उनीहरूको स्तन वा गधा मात्र प्रयोग गरेर फ्लोटिंग टापुमा दस्तक दिनु पर्छ (माफ गर्नुहोस् म अंग्रेजी हुँ)। त्यो सम्पूर्ण कथा हो र यो यो भन्दा धेरै सजिलो छैन। तर के यो तपाईंको महत्त्वपूर्ण र बहुमूल्य समयको लागि मूल्यवान छ? यस ब्लग पढ्न जारी राख्नुहोस् र म तपाईंलाई यो श्रृंखला मा मेरो ईमान्दार राय दिन निश्चित छु।
त्यहाँ एक मुख्य चरित्र (अवश्य) र अन्य पात्रहरूको धेरै जससँग सबैसँग फरक प्रविधि वा सीप छन् जुन उनीहरूले उनीहरूको युद्धमा सहयोग गर्न प्रयोग गर्न सक्दछन्। ती मध्ये धेरैजसो मजाकको हुन् र मलाई वास्तवमै वास्तविक हो भनेर कुनै पनि भेट्टाउन गाह्रो भयो। वास्तवमै मसँग टाँसिएको एउटा "भ्याकम तर क्यानन" हो, तपाईंले सुन्नुहुनेछ धेरै नै। साथै केइजोको औपचारिक नाममा वास्तवमा करिब9उत्खनन चिन्हहरू हुन्छन् हो or वा अझ बढी मलाई थाहा छैन तर म यसलाई अहिले केइजो भनिरहेछु।
कथा पहिले नै केइजो जस्तो कथाको साथ धेरै कम सेट गरिएको छ र यो यति सजीलो अन्य लोकप्रिय एनिममा खडा हुनेछ। कहानी १ 18 बर्षको हो नोजोमी कामिनाशी जब उनी एलिट क्लासमा पुग्न र पेशेवर केइजो खेलमा जानको लागि यात्रा शुरू गर्छन्। यो स्पष्ट छ कि यस श्रृंखलामा प्रायः सबै पात्रहरूलाई सानो चरित्रको गहिराइ दिइयो, त्यसैले तपाईंले केइजोबाट कुनै खास कुराको आशा गर्नुहुन्न, मुख्य कथा के हो भनेर देखिएको छ। त्यहाँ keijo मा फ्यान सेवा कार्य को एक धेरै छ र यो वास्तव मा कहानी मा खेल्दैन।
कथाको आधार यो हो कि केइजोले खेलकुद रेसि other र अन्य जुवा खेलहरू जस्ता अन्य खेलहरूलाई पछाडि पारेको छ किन कि यसले के प्रस्ताव गर्दछ र यसै कारण नोजोमी जस्ता धेरै महिलाहरू केइजोको लागि प्रयास गर्न चाहन्छन्। यस्तो देखिन्छ कि उनी प्राय: सबै कामको लागि उत्साहित छिन्। Nozomi पूर्व पंख केइजो स्कूलमा मिल्छ र उनको यात्रा शुरू गर्दछ। पूर्व र पश्चिमी स्कूलहरूले १० बर्षसम्म एक अर्कासँग लडेका छन् र लगातार १० बर्ष पूर्व इस्ट वि .्गलाई पिटेको छ। यद्यपि नोजोमीले परिवर्तन गर्न सक्नेछ?
सबै भन्दा पहिले हामी 18 वर्ष पुरानो छ नोजोमी कामिनाशी उनी के गर्छिन भन्ने बारे धेरै गहन छ। नोजोमी उनी व्यक्तिको भावना व्यक्त गर्न मन पराउँछिन् जुन उनीसँग सम्पर्कमा आएको लगभग सबै चीज संग छ। उनी पनि धेरै बोरिंग र अविश्वसनीय हुन्, उनी मेरो विचारमा एउटा डरलाग्दो मुख्य चरित्र हो।
म नोजोमीलाई धेरै नै मन पराउँछु किनभने उनी सबै कुरामा यत्ति उत्साहित थिईन् र म इमान्दारीपूर्वक सोच्छु कि मियाताले उनको कथालाई भन्दा जे भए पनि मुख्य चरित्र बनाएको हुनुपर्छ। उनी केइजोको खेलबाट टुक्रिएको छ र व्यावसायिक रूपमा यसलाई अनुसरण गर्न चाहन्छ।
अर्को हामीसँग छ सायाका मियाटा जो Nozomi विपरीत धेरै कुराकानी छैन। उनी आफैंमा अडिग रहन रुचाउँछिन् र उनले सिर्जना गरेको नयाँ प्रविधि प्रयोग गर्न चाहान्छन्। उनी अन्ततः पूर्व-पश्चिम युद्धको साथमा अन्तको कडीहरूमा महत्त्वपूर्ण चरित्र हो।
उनी एकदम महत्त्वपूर्ण चरित्र हुन् र शुरुमा main मुख्य पात्रहरू मध्ये एक बनाउँछिन्। म भन्छु कि उहाँ नोजोमी भन्दा अलि बढी चाखलाग्दो चरित्र हुनुहुन्छ कि उनले पेशागत केइजो क्यारियर बनाउनको लागि जुडोको जीवनको अवसर त्यागिन् र यो मेरो रुचिकारको कुरा हो र यसले उनको चरित्र एकदमै मनमोहक बनायो। उनीसँग पनि यो चीज उनको बुवासँग थियो किनभने उनी जुडो गर्न चाहन्छन् र उनी केइजो आदिमा पस्न चाहन्थे, त्यहाँ छेउछाउको दृश्य छ जहाँ उनी खुशी छन्।
मैले वास्तवमै यो क्यारेक्टरहरूको नाम खोज्नुपर्‍यो, त्यो कति बिर्सिन सक्ने थियो। बाहिर उसको नाम हो काजाने अओबा र उनी राम्ररी बोरि's्ग छिन् यदि तपाईं मलाई सोध्नुहुन्छ। मलाई लाग्छ कि उनको लागि आवाज अभिनेता महिला नै हो जसले रोजारियो भेम्पायरबाट मोआका गर्छिन्। यसको मतलब जब उनी बोल्दै थिएँ मेरो टाउकोमा सुन्न सक्ने सबै "ट्स्कुन, स्स्कुन म तिमीलाई प्रेम गर्दछु टस्क्यून"।
त्यो सबै मैले उनको बारेमा याद गर्न सकिनँ, ओह, तपाईले काजानलाई उनको "स्क्यान ह्यान्ड टेक्निक" मार्फत उनको लक्ष्यहरू पढ्ने क्षमता भएको देख्नुभयो, जुन ती चीजहरू हुन् जुन उनलाई मेरो विचारमा रोचक बनाउँदछ। यस क्षमताले उनलाई कसैको शक्ति प्रयोग गर्न अनुमति दिई उसले छोईएको छ वा ग्रप गरेको छ, मैले भन्नु पर्छ।
र अन्तमा, हामीसँग हावाको टाउको बिम्बो छ, अचम्म मा मैले पनि उनको नाम बिर्सिएँ। यद्यपि गैर टोयोोगुची वा गैर जसरी म उनलाई कल गर्दैछु बिम्बो एयर हेड प्रकार एनिमे चरित्र पूरा गर्दछ र उनको उपस्थिति, संवाद र समग्र उपस्थिति मेरो लागि असह्य थियो।
मैले यस शृ .्खलामा उनलाई वास्तवमै धेरै ध्यान दिएन तर मलाई याद छ कि उनको प्राविधिक त्यो हो कि उनको गधा (मलाई माफ गर्नुहोस् म अंग्रेजी हुँ) यति स्क्वी थियो कि यसले अन्य व्यक्तिहरूबाट धेरैजसो आक्रमणहरू लिन सक्दछ। शृ in्खलाको एउटा चरित्रले यसलाई "मार्श मेलो" भनेर वर्णन गर्दछ, जसले वास्तवमा धेरै अर्थ राख्दैन तर केइजोमा भएका कुनै पनि घटनाले यति बुझ्दैन कि केवल कारणहरू जारी राख्न दिन्छ, किन तपाईं यहाँ पछि हुनुहुन्छ? ।
कारण केइजो हेरिरहेका छन्
फ्यान सेवा सामग्री
अब म तपाइँको साथ धेरै इमानदार हुन र भन्न छ कि Keijo मूल रूप मा एक हो प्रशंसक service टाइप anime। अब यदि तपाईंलाई यसको अर्थ के हो भनेर थाहा छ भने तपाईंले सायद पहिले नै थाहा पाउनु भएको छ यदि तपाईं केजियो हेर्न चाहनुहुन्छ वा अहिल्यै होईन। केइजोमा प्रशंसक सेवा कार्यको एक विशाल रकम छ र त्यो श्रृंखलाको पूरा आधार हुन सक्छ।
केइजोको कथा अनुसरण गर्न धेरै सजिलो छ किनकि यो मूल रूपमा पहिलो एपिसोडमा सेट अप गरिएको छ। यो वास्तवमा कथनको माध्यमबाट गरिन्छ। कथाको प्रकार समाप्त गर्न को लागी स्पष्ट सुरुवात छ र केहि पनि हामीबाट साँच्चिकै राखिएको छैन।
वर्णहरूको विस्तृत दायरा
केजियोसँग चरित्रहरूको एक विशाल श्रृंखला छ र म ती सबै सम्झना गर्न गाह्रो समय थियो (ती यादगार थिएनन् भनेर)। तिनीहरू सबैको बिभिन्न सुविधाहरू हुन्छन् जसले उनीहरूलाई कुनै न कुनै तरिकाले विशेष बनाउँदछन् र यी अर्जित वा दिएका "प्रविधि" को रूपमा प्रयोग गरिन्छ जुन खेलाडीहरूले एक अर्काको बिरूद्ध प्रयोग गर्न सक्दछन्। पात्रहरू सबै फरक समूह र पृष्ठभूमिबाटका हुन्छन् र यसले ती सबै पक्षहरूलाई केही पक्षमा रोचक बनाउँदछ।
सबै प्रकारको कार्यको पूर्ण
त्यहाँ धेरै छ र मेरो मतलब केइजोमा धेरै कार्यहरू छन् र यो यही हो जसले मलाई यो हेर्दै गरिरह्यो, किनकि यो त्यस्तो कथा थिएन जुन मलाई हेरिरहेको थियो र बस्टिंग एक्शन पनि थिएन, यदि तपाईंले मेरो बहावलाई समात्नुभयो भने। त्यहाँ धेरै यादगार फाईट दृश्यहरू छन् जुन मैले श्रृंखलामा मनपर्‍यो र अन्त्यसम्म यो जारी नै रह्यो।
रंगीन र संलग्नता
एपिसोडहरू र उनीहरू प्रस्तुत गरिएको र कोरिएको तरिकाले मेरो आँखालाई समात्यो। हो, एनिमेसन शैली पक्कै पनि विशेष कुरा होईन, तर प्रत्येक एपिसोडहरू तपाईंको ध्यान खिच्ने तरिकाले कोरिन्छ ताकि तपाईं आनन्द लिन सक्नुहुनेछ।
रमाईलो गर्न सजिलो
केइजो हेर्न सजिलो छ र पनि रमाईलो। चुटकुले केवल यति खराब छ कि जे भए पनि तपाईलाई हाँस्न, यो कोठा प्रकार कॉमेडी तिर फिसकेको हुन सक्छ यदि तपाइँले मलाई सोध्नुभयो भने। तर मलाई लाग्दैन कि मान्छेहरूले किइजोलाई चुटकुले हेर्छन्, यो मुख्यतया झगडाको लागि हो र केटीहरूले वास्तवमै केहि बढी केही गर्दैनन्।
कारण केइजो अवलोकन गर्न लायक छैन
मूल कहानी जुन राम्रो छैन
केइजोको कहानी पक्ष कम्तीमा पनि डरलाग्दो छ। तर यो आवाजहरू छन् र प्रत्येक मजाक सेट अप गर्न को लागी खराब छ। मेरो मतलब भनेको पानीको मैदानमा झगडा गर्ने महिलाहरूको समूह हो र उनीहरूको गधा वा स्तनहरू मात्र प्रयोग गर्नु भनेको कथाहरू बताउने स्तर "शहर जहाँ तपाईं बस्नुहुन्छ" वास्तवमै होइन तर यो अझै मूल विचार हो। कथा राम्रो हुन सक्थ्यो र चुटकुले गुणस्तरको स्तरवृद्धि भयो।
धेरै यौन सामग्री
तपाईं सायद यस बारे सचेत हुन सक्नुहुन्छ तर त्यहाँ केइजोमा यौन दृश्यहरूको एक प्रशस्तता छ र यो मुख्यतया सामान्य रूपमा श्रृंखला को सेटिंग्सको कारण। यदि तपाईं एनिमे मा वा सामान्य मा जस्तै दृश्य संग यौन समस्या छैन भने तपाईं केइजो संग एक समस्या हुनुहुन्न। त्यहाँ माथिको माथि पनि छैन तर ती समयहरूमा धेरै कष्टप्रद हुन सक्छन्। यो Ikki Tousen जस्तै पूर्ण विकसित नग्नता होईन तर यो निश्चित छ, चिन्ता नगर्नुहोस्।
खराब गुणवत्ता वर्णहरू
केइजोमा चरित्रहरू धेरै बिर्सन योग्य र साधारणतया नराम्रो हुन्छन् तर चराहरू राम्ररी लेखिएका हुँदैनन्। केवल चीज जुन उनीहरूलाई अद्वितीय बनाउन प्रयोग गरिन्छ त्यहाँ टेक्निक छ, हुनसक्छ मियतालाई बार, जस्तो कि उनीसँग जुडो सब स्टोरी थियो जुन मैले सोचे कि सही दिशामा एक कदम थियो। मलाई यो तथ्य मनपर्‍यो कि उनका आमा बुबा अन्तमा आए, यसले अन्तिम दृश्यहरूलाई धेरै गहन बनायो र उनको चरित्र कथालाई अझ महत्त्वपूर्ण बनायो।
चिन्ता नलिनुहोस् यो आपत्तिजनक छैन, यो कहिलेकाँही सादा बेवकूफ हो। धेरै जसो वार्तालाप केवल खराब लेखिएको छ र म निश्चित छु कि उनीहरूले केहि अनुवादहरू गलत पाएका छन् जुन धेरै खराब छ जुन मैले फनिमेसनमा हेर्दै थिएँ। चुटकुले खराब कार्यान्वयन गरीएको छ र स्लिलोस्टमा केवल हास्यास्पद छैन। म लगभग सबै मजाकहरु मा cringing थियो किनभने उनीहरुलाई कार्यान्वयन गरिएको थियो। धेरै चुटकुले मलाई कत्ति मूर्ख भनेर हाँस्दै थिए, स्थिर "गधा" चुटकुले जस्तै। यदि तपाईंलाई मानव शरीरको बारेमा नराम्रो चुटकी मनपर्दछ भने तपाईंले केइजोलाई हेर्दै विस्फोट पार्नुहुनेछ तर यदि तपाईं म जस्तो हुनुहुन्छ भने तपाईं यसलाई रमाइलो मान्नुहुने छैन, तपाईंसँग त्यस्तो सहयोग गरिरहेको भए पनि।
गरीब र Unoriginal एनिमेशन शैली
केइजो को ड्राइंग शैली धेरै असंगत र बोरिंग थियो र पहिलो नजर मा म यो मन नपराएँ। यो तानियो को बारे मा मूल वा रमाईलो केहि थिएन। यो ठूलो समस्या हुने छैन तर जब बेकमोनोगाटारी वा फ्रिस अफ अफ ग्रिसिया जस्तो श्रृंखलासँग तुलना गरिन्छ। यो यति सुस्त र सादा महसुस भयो, अझै हेर्न लायक र सहन योग्य तर केहि विशेष छैन यदि तपाईंले मेरो अर्थ के पाउनुभयो भने।
मलाई लाग्छ कि यो मुख्यतया पात्रहरू र संवाद हो जसले केइजोलाई तल दिन्छ र यसले स्पष्टसँग देखाउँछ कसरी दृश्यहरू धेरै जसो श्रृuted्खलामा कार्यान्वयन गरिन्छ। धेरै जसो यस एनिमलाई हेर्दछन् कुनै पनि हिसाबले यसका लागि आशा राख्दछन् कि त्यस हिसाबले तपाईंले किजोलाई प्रेम गर्नुहुन्छ वा यसलाई घृणा गर्नुहुन्छ। केइजोको कथा अनुसरण गर्न मात्र धेरै सरल छ, तर बुझ्नको लागि। चुटकुले भयानक हो र त्यसैले चरित्र सुस्त र उथलपुथल तिनीहरू कुनै पनि सम्बन्ध एक अर्को परिणामको रूपमा परिणाम हुनेछ वैकल्पिक रूपमा उल्लेख गर्न नखोज्नुहोस्।
यदि तपाईं ब्यस्त प्रशंसक सेवा कार्यमा हुनुहुन्छ भने केइजो तपाईंको लागि हो किनकि मैले केइजोमा प्रचुर मात्रामा भनेको छ र यही जहाँ आकर्षण केइजोबाट आउँदछ। केइजो हेर्ने अधिकांश मानिसहरूले यसलाई खेलको रूपमा हेर्छन् जहाँ खुला पोखरी सूट लगाउने महिलाहरूले अर्को खेलाडीलाई (जो एक महिला पनि हो) प्लेटफर्मबाट बाहिर धकेल्नु पर्छ। र यो केइजोको साथ तल आउँछ के ठ्याक्कै, वास्तवमै केहि विशेष छैन। केवल अन्य श्रृंखलाहरू जुन म केइजोसँग मिल्दो देखाउन सक्दछु हारुका रिसीभ थियो। हारुका रिसीभ केइजोसँग मिल्दोजुल्दो थियो तर मेरो विचारमा यौनको रूपमा थिएन, यसले खेलकुदमा बढी ध्यान केन्द्रित गर्यो र मलाई थाहा छ कि केइजो जे भए पनि के गर्दछ।
मलाई लाग्छ कि तपाईंले केइजोलाई त्यति गम्भीरतासाथ लिन सक्नुहुन्न जस्तो तपाई सायद सोच्नुभएको हुन सक्छ र यसले हामीले एपिसोड र दृश्यहरू हेर्ने तरिकाले असर गर्न सक्छ। कृपया केइजोलाई हेर्नका लागि सबै कारणहरूको समीक्षा गर्नुहोस् किनकि मलाई लाग्छ कि यसले तपाईंलाई यति सूचित गर्दछ। मलाई आशा छ कि यो ब्लग तपाईंलाई सूचित गर्न प्रभावकारी थियो जस्तो कि यो हुनु पर्छ। पढ्नका लागि धन्यबाद।
टैग: एनिमे animekeijoseries एनिमेसरीहरू केइजो keijoanime keijoseries तपाईंले anime हेर्नु पर्छ तपाईले हेर्नु पर्छ किजो
अघिल्लो प्रविष्टि शीर्ष १० जीवन स्निमेशनमा हेर्न एनिमेसको स्लाइस
अर्को प्रविष्टि Bakemonogatari वर्थ हेर्दै छ?